အစ္စလာမ့်ရေးရာ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on August 4, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
အနာဂတ်အတွက် ရဲရဲတောက် အစ္စလာမ်ဇာနည်များ
အလောင်းမင်းတရားလက်ထက် အောက်ပြည်အောက်ရွာသို့ ချီတက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် မွန်စစ် သူကြီး တလပန်း နှင့်ပြည်မြို့ အနီး တိုက်ခဲ့ရသည်။ မွန်တို့ဖတ်မှ ပသီ ၊ ပန်းသေး တို့က မြောက် စိန်ပြောင်း နှင့်လှမ်းကာပစ်လွှတ် လေလျှင် ရဲမတ်တော် အပေါင်းတို့ ထိပါးသေဆုံးသည်ကား မရေ တွက်နိုင်အောင်ရှိ၏။ (လက်ဝဲအနော်ရထာ၊ အလောင်းဘုရား အရေးတော် ပုံ မှတ်တမ်းများ ၊စာ -၇၀)
အလောင်းမင်းတရား ရန်ကုန်ကိုအောင်နိုင် သောအခါ မွန်တို့ဘက်မှ အလောင်းမင်းတရားကြီး ကို သစ္စာခံကြသည်။ထိုသစ္စာ ခံ တပ်များထဲတွင် တစ်ကျွန်းသား ပသီ သင်္ဘောသူဌေး (၄)ဦးတို့ လည်း ရွှေရက် ငွေရက် အုပ်မျိုးထည်မျိုး သေနက်လက်နက် လက်ဆောင်တောများ ဆက်သ၍ သင်္ဘော၎စင်းနှင့် တကွ အမှုတော်ကိုထမ်းပါမည် ဟု ခြေတော်ရင်း ခိုဝင်လာ၏။ (အလောင်း ဘုရား အရေးတော်ပုံ မှတ်တမ်း စာ ၇၇)
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၇၈၁-၁၈၁၈) (ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၁၄၃-၁၁၈၁) အမရပူရနန်းတည် ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း (ပဒုံမင်း) လက် ထက် ပသီများအတွက် အာပစ်ရှာ ဟိုသိန္ဒိ ကို တရားသူကြီး အဖြစ်ခန့်ကြောင်း အမိန့်တော် ပြန်တမ်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။ (ဘိုးတော် မင်းတရားကြီး ၏ ရာဇသတ်ကြီး (ခ) အမိန့်တော်ပြန်တမ်း ကြီး ၊အတွဲ (၄) ၊စာ-၁၇၆) ထိုခေတ်မှာပင် ရမ္မာ ၀တီ မြို့ ၀န် ၊ရွှေတောင် သာဂသူ စာဆိုတော်ကြီး ဦးနု (ခ ) မိုဟမ္မဒ် ကာစင်ကို အိန္ဒိယ ပြည်သွားရောက်၍ သက္ကဋ ကျမ်း ၊ ဟိန္ဒူ ကျမ်း ၊ နှင့် ပသီကျမ်း များကို သယ်ယူသည့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါ သည်။ (ကုန်းဘောင် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ဒု-တွဲ၊ စာ-၁၅၇/၁၆၆)
ရမူးပန်းဝါ တိုက်ပွဲ မစမီ မြန်မာ တပ်မတော်မှ တပ်မှူးတပ်သားများ လှံရှည် ၊ အဲမောင်း ၊ များကို ကိုင်၍ စစ်ရေး ပြစေခဲ့ ပါသည်။ ထိုစစ်ရေး ပြရာတွင် တပ်ဗိုလ် နေမျိုးဂုဏ် နရပ် ဘွဲ့ ရ ခန်ဆပ်ဗိုလ် ဦးစီးသော မြင်းစီးရေး (၇၀)ကျော်က မြင်းရေး ကစား သည်ကို စစ် ခေါင်းဆောင်ကြီး ၀န်ကြီး သတိုး မဟာဗန္ဓ္ဓုလ က ရွှေထီးဖြန့်ပြီး ရှုစားတော်မူခဲ့သည်။(ကုန်းဘောင် ဆက် မဟာ ရာဇ၀င်တော်ကြီး ၊ ဒု-တွဲ ၊စာ – ၃၉၂)
ဘကြီးတော်က တိုင်းပြည်နှင့် ဘုရင့်အပေါ် သစ္စာရှိပြီး တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြသော တပ်မတော်သား များကို ဂုဏ်ပြုရာတွင် အစ္စလာမ် သေနက်အစုသား ၊(၁၃၀၀) ကျော်တို့အား ဘောက် တို ရွှေပိန်၊မျဉ်းတို သက္ကလပ် စိမ်း၊ မျဉ်းရှည် သက္ကလပ်နီ၊ သက္ကလပ် စိမ်း အဖြူဆင့် တို့ကို ချီးမြင့်ခဲ့ပါ သည်။ (ကုန်းဘောင်ခေတ် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး၊ ဒုတိယတွဲ ၊စာ – ၄၇၇)
မင်းတုန်းမင်း နှင့် ကနောင်မင်းသား တို့ နောင်တော် ပုဂံမင်းသား ကိုခြားနားရာတွင် အစ္စလာမ် သေနတ်အစုသား များပါဝင်ခဲ့သည်။(ကုန်းဘောင် ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော် ကြီး တတိယတွဲ၊ စာ – ၁၃၉)
မင်းတုန်းမင်လက်ထက် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရန် စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းရာတွင် (၁)ရံဖြိုခွင်း(၂) ရံပုံခွင်း(၃) ရဲကင်း (၄) ရဲလင်း(၅) လက်မနှိပ် ဟူသော အမြောက်တပ်ကြီးများတွင် တပ်မှူး တပ်သားများမှာ ကင်းတား မြေတူးပသီများ ပါဝင်ကြပါသည်။(ဦးမောင်မောင်တင် ၊မဟာဝိဇ္ဖာ မြန်မာမင်း လက်ထက် စာတမ်းများ စာ – ၆၆ -၇၁-၇၂)
မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအတွက် သာသနာ့ကျင့်စဉ် အရ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်ရန် ကာဘူလ် မော်လ၀ီကြီး ကို ဓမ္မသတ် မှူးအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန် ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၁၈) တပေါင်း လ ဆန်း ၃ရက် နေ့တွင်ရတနာပုံ မန္တလေးမြို့ တည် ရေးအတွက် လူပေါင်းများစွာ နှင့် မြို့ကွက်ရှင်းရာ ဗိုလ်မင်းထင်ရာဇာ ဦးစီး သော ပသီအမျိုးသား (၄၀၀) ကျော် ပါဝင်ခဲပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၂၁၉ ၀ါခေါင်လဆန်း ၁၂ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ သို့ မင်းနေပြည်တော်ပြောင်း ရွှေ့ရာတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံကို အစုလိုက် နေရာချ ထားပေးပါသည်။ ပသီလူမျိုး ဟု သတ်မှတ် ထား သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် (၁)စစ်ကိုင်းတန်း (၂) ကန်းရိုးတန်း(၃) တောင်ပလူ(၄)အိုးဘို (၅) စကြာ နွယ် ဇင်(၆) ဂျွန်းအမြောက်တန်း(၇) ၀လီခန် ရပ်(၈) တိုက်တန်း ရပ်ကွက် (၉) ကိုယ်ရံတော်ရပ် (၁၀) အချုပ်တန်း ရပ်ကွက်(၁၁)ပသီ ရပ်ကွက် စုစုပေါင်း ၁၁ရပ်ကွက် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
သီပေါမင်းလက်ထက် ၁၂၄၁ ခုနှစ် ၊ သီတင်းကျွတ် လကုန်ပိုင်းတွင် တပ်ခင်းရန် ဘုရင်က အမိန့်တော် ထုတ်ဆင့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ ကင်းတား သီပေါမင်းလက်ထက် ၁၂၄၁ ခုနှစ် ၊ သီတင်းကျွတ် လကုန်ပိုင်းတွင် တပ်ခင်းရန် ဘုရင်က အမိန့်တော် ထုတ်ဆင့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ ကင်းတား ပသီ သေနက်ကိုင် ဗိုလ်မင်းထင်ကျော်သူ နှင့်ကင်းတာ ပသီအစု သေနက် ကိုင်စွဲသူ လူ ၃၅၀ တပ်တစ်တပ် ၊စကြာင်္အမြောက် ဗိုလ်ဟာရှင် နှင့် အမြောက် အမှုထမ်း လူ(၁၁၃) တစ်တပ်၊ မင်္ဂလာအမြောက် ဗိုလ်ဦးကြယ် နှင့် လူ (၁၁၃) တစ်တပ်၊ မင်္ဂလာအမြောက် ဆူးလေကုန်း ဗိုလ် ဦးမောင် နှင့် အမှုထမ်း လူ (၁၁၃) တစ်တပ် မင်္ဂလာ အမြောက် ဘုံးအို ဘို ဗိုလ်ဦးယောက်နှင့် အမှုထမ်း လူ (၁၁၃) တစ်တပ်ကို စစ်အင်္ဂါ ခင်း ပြခဲ့ပါသည်။ (ကုန်းဘောင် ဆက် မဟာ ရာဇ၀င်တော်ကြီး ၊ တတိယတွဲ ၊ စာ-၅၂၄/၅၂၆)
ယင်းသို့ ကုန်းဘောင်မင်း အဆက်ဆက်တွင် ခိုဝင်သစ္စာ ခံ အမှုထမ်းကြသူများမှာ ဘင်္ဂါလီ များ မဟုတ်ကြပဲ မြန်မာ မွတ်ဆ လင်မ် စစ်စစ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
This entry was posted on April 10, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
This entry was posted on February 9, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
This entry was posted on February 8, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
လူသား၏ ကန့်သတ်ချက်ရှိသော လွတ်လပ်စွာ ပြုပိုင်ခွင့်နှင့် ဒုက္ခတရား လူသားသည် လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပြုပိုင်ခွင့်ကို အမှန်တကယ်ရထားသော်လည်း ဖန်ဆင်းခံ၏ သဘာဝအရ အကန့်အသတ်တွင်းမှသာ ဖြစ်သည်။ စကြဝဠာ လောကခပ်သိမ်းနှင့် ယှဉ်သော အလ္လာဟ်၏ စီမံကိန်းကို အလ္လာဟ်၏ တရားမျှတမှု၊ ကရုဏာတော်၊ အကြွင်းမဲ့သိတော်မူသော ဉာဏ်တော်၊ ဘုန်းတော်တို့ဖြင့် ပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ လူသား၏ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပြုပိုင်ခွင့်သည် အလ္လာဟ်၏ စီမံကိန်းကိုကား ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်း မရှိ၊ အလ္လာဟ်၏ စီမံကိန်းအတွင်း၌သာ လွတ်လပ်စွာ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထား၍ စမ်းသပ်တော်မူခြင်း ဖြစ်၏။ လူသားသည် လူ့လောက မရောက်မီ မိမိ၏မိဘ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ နိုင်ငံ၊ အသားအရောင်၊ ကျား/မ နှင့် သန္ဓေတည်ရမည့်အချိန် စသည်တို့ကို မရွေးချယ်နိုင်ချေ။ အလ္လာဟ်ပို့သည့် သားအိမ်သို့သာ သတ်မှတ်ချိန်၌ ဝင်ကြရသည်။ သေဆုံးချိန်ကို စက္ကန့်မျှပင် နောက်ရွေ့၍ မရချေ။ ထို့အတူ အသက်ရှင်စဉ် ကာလတွင် သုခ,များ ခံစားရသလို ဒုက္ခများလည်း ကြုံကြရ၏။ (ကုရ်အာန် ၅၂း၃၅-၃၆။ ၃း၆။ ၂၈း၆၈) လူသားတို့ထံ ကျရောက်သော ဒုက္ခများတွင် အကြောင်းများရှိပေသည်။ ပထမအချက်မှာ လူသားကိုယ်တိုင်က မှားယွင်းသည့်အတွက် အကျိုးဆက်အဖြစ် ဒုက္ခခံစားရခြင်း ဖြစ်သည်။ “စင်စစ်ဧကန် အလ္လာဟ်သည် (မိမိ၏) ကျွန်များအပေါ် မတရား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တော်မူသော အရှင်မဟုတ်ပေ” (ကုရ်အာန် ၃း၁၈၂) “စင်စစ်သောဝ်ကား အသင်တို့၌ သက်ရောက်လေ့ရှိသော ဘေးဒုက္ခဟူသရွေ့သည် အသင်တို့၏ လက်များ၊ ဆည်းပူးခဲ့ကြသော အပြုအမူတို့ကြောင့်ပင် သက်ရောက်ခဲ့သည်သာ၊ ထိုမှတစ်ပါး အလ္လာဟ်သည် များစွာသော ပြစ်မှုများကိုကား ခွင့်လွှတ်တော်မူ၏” (ကုရ်အာန် ၄၂း၃၀) ထို့ကြောင့် လူသားတိုင်းသည် မိမိထံ ဒုက္ခ သက်ရောက်လာတိုင်း မိမိသည် သဘာဝနှင့်အညီ ချပေးထားသော အလ္လာဟ်၏ လမ်းညွှန်နှင့် ဆန့်ကျင်သော အရာကို ပြုသည့်အတွက် ဒုက္ခရခြင်းသာဖြစ်၍ အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ရပေမည်။ အလ္လာဟ်ထံမှ ခွင့်လွှတ်မှုကို တောင်းပန်ရမည် ဖြစ်ပေသည်။ အလ္လာဟ်၏ စမ်းသပ်မှုနှင့်ဒုက္ခတရား ဒုက္ခများ ကျရောက်ခြင်း၏ အခြားတစ်ချက်မှာ အလ္လာဟ်၏ စီမံကိန်းအရ အလ္လာဟ်ကို ယုံကြည်သူတို့အား စမ်းသပ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ “ငါအရှင်မြတ်သည် မှတ်တမ်းစာအုပ်တော်ကြီးတွင် ယင်း ဘေးဒုက္ခကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း မခံရမီကပင် (ရေးသားထားခြင်း) မရှိဘဲလျက် မည်သည့်ဘေးဒုက္ခမျှပင် ကမ္ဘာဂြိုဟ်၌သော် လည်းကောင်း၊ အသင်တို့၏ ကိုယ်၌သော် လည်းကောင်း ကျရောက်နိုင်သည် မဟုတ်ပေ၊ ဧကန်အမှန် ဤသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၌ လွယ်ကူလှပေသည်။ (ဤသည်ကို သိလော့) သို့မှသာ အသင်တို့သည် မိမိတို့ထံမှ လွတ်သွားသော အရာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပူဆွေးခြင်းရှိကြမည်လည်း မဟုတ်၊ မိမိတို့အား ထိုအရှင်မြတ်က ချီးမြင့်ပေးသနားတော်မူသောအရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (အလွန်အမင်း) ဝမ်းမြောက် မော်ကြွားခြင်းပြုကြမည်လည်း မဟုတ်ချေ။ အမှန်သော်ကား အလ္လာဟ်သည် မည်သည့် မာနထောင်လွှားသူ၊ ဂုဏ်မောက်သူကိုမျှ နှစ်သက်တော်မူသည် မဟုတ်ပေ” (ကုရ်အာန် ၅၇း၂၂) “ထို့ပြင် အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်၏ လမ်းတော်တွင် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူတို့ကို သူသေများ ဟူ၍ မပြောဆိုကြကုန်လင့်၊ အလျှင်းမဟုတ်။ စင်စစ် ထိုသူတို့သည် အလ္လာဟ်၏ ထံတော်တွင် ရှင်လျက်ပင် ရှိကြ၏။ သို့ရာတွင် အသင်တို့သည် (ထိုအကြောင်းကို) တွေးဆဆင်ခြင် သိမြင်နိုင်စွမ်း မရှိချေ။ ထို့ပြင် မလွဲ ဧကန် ငါအရျင်မြတ်သည် အသင်တို့ကို တစ်စုံတစ်ခုသော ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ်စေခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ငတ်မွတ်စေခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဥစ္စာပစ္စည်းများ ဆုံးပါးစေခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးစေခြင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ (ကြိုးပမ်းမှု၏) သီးနှံများ ဆုံးရှုံးစေခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း စမ်းသပ်တော်မူအံ့၊ သို့ရာတွင် (ထိုစမ်းသပ်မှုများ၌) ဆွဘရ်-ကြံ့ခိုင်မှုတရား ထားရှိသူတို့အား ဝမ်းမြောက်ဖွယ် မင်္ဂလာ သတင်းကိုပေးလော့၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ အပေါ်၌ ဘေးအန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ ကျရောက်လာသော အခါ ‘ဧကန် အမှန်ကျွန်ုပ်တို့သည် အလ္လာဟ်၏ အဖို့သာ ဖြစ်၍ မုချဧကန် ထိုအရှင်မြတ်အထံတော်သို့သာ ပြန်သွားကြရမည့်သူများသာ ဖြစ်ကြ၏’ဟု ဆိုလေ့ရှိကြကုန်၏” (ကုရ်အာန် ၂း၁၅၅-၁၅၆)
အင်ရှာလ္လာကျွန်တော်ကတော့လာမည့်၂၀၁၃ဟဂ်ျကိုအရှင်မြတ်အလိုတော်နဲ့သွားမယ်လို့နိယတ်ထားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ကသွားခဲ့တဲ့နောင်တော တွေ၊ဦးလေး၊ဒေါ်ဒေါ်တွေကိုဟဂ်ျခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သိသင့်တာတွေသိချင်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်ကဟဂ်ျအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေကမသွားခင်ကတော့အာမခံ၊တာဝန်တွေခံပြီးမက္ကာ၊မဒီနာရောက်ရင်ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်ဟဂ်ျတာဝန်တွေချနေရတာဆိုတော့အရင်ဆုံးကိုယ်နဲ့တွဲမယ့်လူရှာရမှာပေါ့အချို့ကုမ္ပဏီတွေကဒေါ်လာအများကြီးတောင်းတယ်ပြီးရင်ကတိမတည်ဘူး။တည်းခိုရမယ့်နေရာကကာဗာဝတ်ကျောင်းတော်နဲ့အဝေးကြီး၊ကားငှားစီးသွားရင်အသွားအပြန်တစ်ရက်၇ီ၇ယ်တစ်ရာလောက်ကျရင်ဗမာငွေ၃သောင်းကျော်ပေါ့တစ်လဆိုရင်၁၀သိန်းမထူးပါဘူးကာဗာနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတည်းခိုမယ့်ကုမ္ပဏီကိုဈေးပိုပြီးပေးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့လူက၆၀၀ကျော်နေပြီထမင်းစားမယ်ဆိုရင်တန်းစီရမယ်။တစ်နာရီလောက်ကြာတယ်။နောက်ကျရင်ကုန်ပြီဝယ်စားရတော့မယ်။ထမင်းစားဖို့အတွက်ကာဗာထဲကအစောကြီးပြန်ရမယ်။ဒါဆိုရင်အောက်ကြေးနဲ့အကျိုးဆောင်တွေရှိသေးတယ်။သူတို့ကတခြမ်းဘဲပေးတဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်၊မော်လင်ကြေး၊ဗီဇာကြေး၊တည်းခိုခန်းခ၊စားဖို့သောက်ဖို့နဲ့ကုရ်ဘာနီအတွက်ကကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းရောင်းမယ့်လူတွေကများတော့သူတို့နဲ့ပါတယ့်ပုဆိုးထုတ်တွေ၊ပုဇွန်ခြောက်တွေ၊သရက်သီး၊မရမ်းပြားအချဉ်ပေါင်းထုပ်တွေ၊ဆေးလိပ်တွေ၊အသားခြောက်တွေကိုဝိုင်းပြီးသယ်ပေးရဦးမယ်တဲ့။အသွားတုန်းကကိစ္စမရှိဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းကဘာပါတာမှတ်လို့၊အပြန်ကျရင်ဟာဂျီပြန်လက်ဆောင်ဆိုတော့ဇာနမာတ်နဲ့ဦးထုပ်၊ကော်ဇောနဲ့ဇမ်ဇမ်ရေလောက်တော့သယ်ချင်တာပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒေါ်လာ၅၀ထပ်ပေးတဲ့၊၀ယ်တဲ့ပစ္စည်းတောင်မှဒေါ်လာ၅၀ဘိုးမရှိတာကိစ္စမရှိဘူး။အပြန်ကျရန်ကုန်ရောက်ရင်အမွှညီနောင်မှာဟဂ်ျလက်ဆောင်ပစ္စည်းအကုန်ဝယ်လို့ရနေတာဘဲ။ဆိုင်တွေက၀ယ်ပြီးခပ်တည်တည်နဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်မှာပေါ့။အောက်ကြးနဲ့လိုက်ရဘို့ကအဓိကဘဲ။
This entry was posted on February 5, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
This entry was posted on February 4, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အလိုမတူပဲ အသင့်အား မည်သူမျှ ဒုက္ခမပေးနိုင်
“ဟဇရသ်အဗ်ဒုလ္လာဟ် အိဗ်နု အဗ်ဗားစ်မှ ဆင့်ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “တစ်နေ့၌ ကျွန်ုပ်သည် တမန် တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်းဟိ ၀စလာမ်)သခင်၏ အနောက်၌ ရှိနေစဉ်၊ ကိုယ် တော်မြတ်မှ ကျွန်ုပ်အား မိန့်ရှိခဲ့သည်မှာ “လူလေး- ကျွန်ုပ် အသင့်အား အချို့စကားရပ်များကို သင်ကြား ပေးအံ့။ အသင်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်ပတ်သက်သည့် တာဝန်များကို ကျေပြွန်ပါ။ အသင့်အား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူအံ့။ ထို့ပြင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် နှင့်ပတ်သက်သည့် တာဝန်များကို ကျေပြွန်ပါ။ (သင် ဒုက္ခရောက်သောအခါ) အရှင်မြတ်အား အသင့်အရှေ့တွင်တွေ့ရအံ့။ တောင်းစရာရှိလျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ထံတော်ပါး၌ တောင်းခံပါ။ အကူ အညီလိုလျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ထံတော်ပါးမှ အကူအညီကို တောင်းခံပါ။ အကယ်၍ (လောကမြေပြင်ရှိ) လူသားအားလုံး စုစည်း၍ ကောင်းစားစေရန် အသင့်အား ကောင်းမှုပြု လျှင် လည်း အရှင်မြတ်မှ သတ်မှတ်ထားသည်ထက်ပို၍ အသင့်အား ကောင်းကျိုးမပြုနိုင်။ အကယ်၍ (လောကမြေပြင်ရှိ) လူသားအားလုံး စုစည်း၍ ဒုက္ခပေးရန် ကြိုးပမ်းကြလျှင်လည်း အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်မှ သတ်မှတ်ထားသည်ထက်ပို၍ ဘေးဒုက္ခရောက်စေနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ ကလောင် တံသည် ‘မ’ယူခြင်းခံခဲ့ရပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ စာရွက်များသည်လည်း ခြောက်၍ သွားခဲ့လေပြီ။”” (စုနန်းသီရ်မိဇီကျမ်းကြီး)
အီမာမ်သီရ်မိဇီ(ရဟ်မသုလ္လာဟ်)သခင်မှ သုတေသနပြု စုဆောင်းတင်ပြခဲ့၍ သခင်မှ ဤဟဒီးဆ် တော်မြတ်အား စစ်မှန်သော ဟဒီးဆ်တော်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
[Imam Al-Tirmidhi relates this and says: It isagood, genuine Hadith]
— with Win Htun and 97 others.
This entry was posted on January 22, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
သင့်ဘဝအတွက် အစ္စလာမ့်စာမျက်နှာ‘s photo.
Salam to all of our fans………..
တစ်လတိတိပြည့်မြောက်ခဲ့လေပြီ။ အစ္စလာမ့် အသိပညာလေးတွေကို
“သင့်ဘဝအတွက် အစ္စလာမ့်စာမျက်နှာ” ဆိုတဲ့ လှေကြီးနဲ့ ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ထံသို့ ကျွန်တော်တို့ ပို့ဆောင်ပေးနေခဲ့တာ ဒီနေ့ဟာ တစ်လတင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပေပြီ။ ထိုတစ်လအတွင်း ချစ်ပရိတ် သတ်များကို အတိုင်းအတာလေး တစ်ခုလောက်ထိတော့ အစ္စလာမ့် အသိပညာလေးတွေဝေငှ နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လှေကြီးကို လှော်တက် (၅)တက်နဲ့ စတင် လှော်ခတ်ခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် လှော်တက်(၈) ခုနဲ့ တက်ညီလက်ညီ လှော်ခတ်နေဆဲ . . အသိပညာလေးတွေ ပို့ဆောင်နေဆဲပါ။ အဲ့ဒီ (၈)ခုကတော့ . . . (၁)ကျွန်တော်တို့ သတိမမူမိသော လုပ်ရပ်လေးများ၊ (၂)အစ္စလာမ့် ရေးရာ ဗဟုသုတလေးများ၊ (၃)သေးငယ်သောလုပ်ရပ်များမှသည် ကြီးမားသောအကျိုးများဆီသို့၊ (၄)အစ္စလာမ့် ပညာရှင်များ၏ အဆိုအမိန့်များ၊ (၅)စာနာမှု ပုံရိပ်လေးများ၊ (၆)သင့်အတွက် လက်ဆောင်မွန်၊ (၇)မြင့်မိုရ်တောင်သို့ တက်ကြည့်ခြင်း၊ (၈)ဘဝ အတွက် စာစုလေးများ တို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ မတင်းတိမ်နိုင်သေးပါ။ အစ္စလာမ်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လူတိုင်း မသိမဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ၊ မွတ်စလင်များကြား လွဲမှားနေတဲ့ ခံယူချက်တွေ ၊ အယူအဆလေးတွေ စတဲ့ မြောက်မြားစွာသော အသိပညာများကို ကျွန်တော်တို့ အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ ဝေငှချင်ပါသေးတယ်။ ကြိုးစားရပါဦးမယ်။ လှော်နေတဲ့ လူတွေက အားအင်အပြည့်လှော်နေပေမယ့် သူ့တို့အတွက် အားဖြစ်စေမယ့် အရာတွေတော့ လိုပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ပထမဆုံး အရှင်မြတ်ရဲ့ ကူညီမှု ၊ စောင့်ရှောက်မှု ပြီးတော့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ အားပေးမှုပါပဲ။ အားပေးမှုဆိုတာ တက်ညီလက်ညီလှော်ခတ်ရင်း ရှေ့ဆက်နေတဲ့ ကျွန်တော် တို့လှေကြီးကို လက်ခုပ်တီးပေးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လှေကြီး အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ အန္တရာယ်ကင်းကင်း ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့အတွက် အလ္လာဟ်ထံမှာ ဒိုအာတောင်းခံပေးဖို့ နဲ့ မိမိရရှိ လိုက် တဲ့ အသိပညာလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီး အများသူငှာကိုပါ ဝေငှပေးဖို့ပါပဲ။အဲဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးဆီက လိုချင်တဲ့ အားပါပဲ။
ကဲ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ . . .
ကျွန်တော်တို့ စာမျက်နှာလေးရဲ့ တစ်လပြည့်မြောက်တဲ့နေ့လေးမှာ အမှတ်တရအနေနဲ့ ချစ်ပရိတ် သတ် ဆီက အမှတ်တရစကားလေးတွေကြားချင်ပါတယ် . . . ။ ချစ်ပရိတ်သတ် အားလုံးကို အစဉ်လေးစားလျက် . . .
This entry was posted on January 22, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment
“အို- မုအ်မင်န် သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည် (မည်သည့်ကိစ္စမျိုး၌မဆို) တရားမျှတမှုကို ထာဝစဉ် တည်တံ့စေသူများ (တနည်း) တရားမျှတမှုအပေါ်၌ မြဲမြံစွာ တည်တံ့ သူများ ဖြစ်ကြလေကုန်။ (သက်သေခံရာ၌လည်း)မိမိတို့ ကိုယ်ကျိုးနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ ၊ မိဘနှစ်ပါးနှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ၊ ဆွေမျိုးနီးစပ်တို့နှင့် ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ ၊ (အသင်တို့ သည်) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကိုသာ ထောက်ထား၍ (တိကျမှန်ကန်စွာ) သက်သေခံသူများပင် ဖြစ်ကြလေကုန်။
အကယ်၍ (အသင်တို့က) ဆန့်ကျင်၍ သက်သေထွက်ဆို ရမည့်သူသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူပင်ဖြစ်စေ ၊ ဆင်းရဲသူပင်ဖြစ်စေ (မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် (အသင် တို့ထက်) ၄င်းတို့နှစ်ဦးလုံးနှင့် အနီးစပ်ဆုံးသော အရှင် ဖြစ်တော်မူပေ၏ ။ သို့ဖြစ်ပေရာ အသင်တို့သည် တရားမျှတမှုမှ တိမ်းစောင်းမသွားကြရန် စိတ်၏ အလိုဆန္ဒကို မလိုက်နာ မလိုက် စားကြကုန်လင့်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်သင်ကြားနေသော ဆော်ဒီကျောင်းသားတစ်ဦး သည် အာယာသ်တော် အား ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ သူ၏ Twitter page တွင် ဖော်ပြခဲ့ခြင်းကို ဆော်ဒီ နေ့စဉ်သတင်း စာ Ajel မှ တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဥပဒေဌာနက တင်လိုက်တဲ့ ဒီ အာယာသ်တော် ဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် တရားမျှတခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံးသော ဖော်ပြချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းသိ ပါတယ်” ဟု ထိုကျောင်းသား Abdullah Jumma က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
This entry was posted on January 18, 2013, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
စွန့်လှူခြင်း (သို့) ကုရ်ဗာနီ ၏အဓိပ္ပာယ်
စွန့်လှူခြင်း (သို့) ကုရ်ဗာနီ ကုရ်ဗာနီ၏အဓိပ္ပာယ်“ကုရ်ဗာနီ”ဟူသော ဝေါဟာရသည် “နီးကပ်ခြင်း” ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ယင်းဝေါဟာရကို ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တွင် “အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံသို့ နီးကပ်စေခြင်းပြု သည့်အရာ” ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်သုံး ထားပါ သည်။[ကြည့်၊(၅း၂၇၊၃း၁၇၉၊၄၆း၂၈)]
ဝေါဟာရအဘိဓာန်ဖွင့်ဆိုချက်များအရ “ကုရ်ဗာနီ”၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ သားကောင်ကို(ဇဗာဟ်)ပြုမှုအပါအ၀င်အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုရယူရန်ပြုကျင့်သည့် ကောင်းမှု အားလုံး အကျုံးဝင်ပါ သည်။ထို့ကြောင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ မြတ်နိုးမှု၊နှစ်သက်မှု၊ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ရရှိစေရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကျင့်ကြံအားထုတ်သော ကောင်းမြတ်သည့် ကျင့်စဉ်ကျင့်ရပ်ဟူသမျှကိုလည်းကောင်း၊ စွန့်လှူမှုဟူသမျှကိုလည်းကောင်း“ကုရ်ဗာနီ”ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်။
“ကုရ်ဗာနီ”ဟူသည် မိမိ၏ အတ္တ၊ မိမိ၏ အသက်ကို စတေး၍၊ မိမိ၏စည်းစိမ်ဥစ္စာကို စွန့်လှူ၍ အရှင့်ထံပါးသို့ နီးကပ် စေခြင်းဖြစ်၏။“စွန့်လွှတ်ခြင်း”၊ “စွန့်လှူခြင်း”၊ “အနစ်နာခံခြင်း” တို့သည် အရှင့်ထံပါးသို့ နီးကပ် စေ သောအရာများဖြစ်၏။ ပိုင်ဆိုင်လိုခြင်းသည် လူ၏ “အတ္တဗီဇ”ဖြစ်၏။“လောဘ”ဖြစ်၏။စွန့်လှူခြင်းသည် “အလောဘ”ဖြစ်၏။ရယူခြင်းသည် “ရေစုန်”ဖြစ်၏။စွန့်လှူခြင်းသည် “ရေဆန်”ဖြစ်၏။
စွန့်လှူ ရခြင်းသည် မိမိ၏စိတ်ကိုဆန့်ကျင်ပြောင်းလဲရ၏။ ထိုသို့ ခက်ခဲသည့် စွန့်လှူမှုကို ပြုနိုင်ပါမှ ထူးခြားသည့် မြင့်မြတ်သော စိတ်အင်အားကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်ထံတော်မှ အကူ အညီများ လည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။“ကုရ်ဗာနီ”သည် အမှန်တရားအတွက် အသက်ကိုစွန့်ရန်၊ “အလ္လာဟ်” အရှင်မြတ်အတွက် အသက်ပေးလှူရန်၊ အားသစ်လောင်းပေးခြင်း၊ အလေ့အကျင့်ပြု ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ခေတ် အသီးသီး၌ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည့် အယူဝါဒ အသီးသီး တို့တွင်“ကုရ်ဗာနီ”တည်းဟူသော မြတ်သောကျင့်စဉ်ကို ပြဋ္ဌာန်းတော်မူခဲ့ကြောင်းကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်(၂၂း၃၄) တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
“စင်စစ် ငါအရှင်မြတ်သည်သာသနာဝင်အုပ်စုတိုင်းအဖို့ စွန့်လှူခြင်းပွဲတော်တစ်ရပ်ကိုသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူခဲ့သည်။ ၄င်းတို့အတွက် ချီးမြှင့်ပေးသနားတော် မူထားသောခြေလေးချောင်း တိရစ္ဆာန်တို့ အပေါ် ၀ယ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏နာမတော်ကိုတသ၍(လှီးဖြတ်)ရန် ဖြစ်ပေသည်။စင်စစ်သော်ကားအသင်တို့၏ကိုးကွယ်ရာ အရှင်သည်တစ်ဆူတည်းသော ကိုးကွယ်ရာအရှင်ဖြစ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်ပေရာ အသင် တို့သည်ထိုအရှင်မြတ်ကိုသာ နာခံအပ်နှင်းကြလေကုန်။ မိမိကိုယ်မိမိ မာန်မာနနှိမ့်ချသူများကိုဝမ်းမြောက် ဖွယ် သတင်း ကောင်းကိုပေးလော့” ကုရ်အာန်(၂၂း၃၄)
“ကုရ်ဗာနီ”ပြုလုပ်ခြင်းသည် တမန်တော်ကြီးအိဗ်ရာဟီမ်၏ “အလ္လာဟ်”အရှင်မြတ်အတွက် စွန့်လှူမှုပြုခဲ့သည့်ကျင့်စဉ်ကို ဖ၀ါးခြေထပ် လိုက်နာ ကျင့်သုံး အကောင်အထည် ဖော်ကြ ရခြင်းဖြစ်သည်။အစ္စလာမ် သာသနာ၏ ကျင့်စဉ်ကျင့်ရပ်တိုင်းတွင် စတင် ခဲ့သည့် အရင်းအမြစ် မူလ သမိုင်းဖြစ်ရပ်များ အခိုင်အမာရှိ၏။ ဖြစ်တည်ပေါ်ထွန်းရာ ပထ၀ီဒေသ အခိုင်အမာ ရှိ၏။အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အဆုံးအမ တိုင်းသည် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ် အမိန့်တော်အတိုင်း စံနမူနာပြ လုပ်ဆောင်ခဲ့သောတမန်တော်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနောင်လာ နောက်သား “မွတ်စ်လင်မ်”တို့အား ပြန်လည် ပုံဖော်လုပ်ဆောင် စေရန်ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
တမန်တော်ကြီး အိဗ်ရာဟီမ်သည် ငယ်ရွယ်စဉ် ကပင် နေ၊ လ၊ ကြယ်….. အစရှိသော သဘာဝတရားများကိုလေ့လာသုံးသပ်ကာ ကိုးကွယ်ရာအရှင်သည် စကြ၀ဠာ အပေါင်းကို ပြုစုပျိုးထောင်တော်မူသော ထာဝရအရှင်အဖြစ်တစ်ဆူတည်းသာလျှင် ရှိရမည်ဖြစ်သည်ကို သိရှိခဲ့ကြောင်း ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
တမန်တော်အိဗ်ရာဟီမ်သည်တမန်တော်အပေါင်း တို့အနက်ထူးခြားသည့်အာဇာနည်တမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သည်။အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ စမ်းသပ်မှုဟူသမျှကို၊ အရည်အသွေး မှတ်ကျောက်တင်ခြင်းဟူသမျှ ကို အောင်အောင်မြင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်သာဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ အရည်အသွေး မှတ်ကျောက်တင်ပွဲများတွင် အောင်မြင်မှုသရဖူဆောင်းနိုင်ခဲ့သည့် အတွက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်တော်မှ “ခလီလွလ္လာဟ်”- “အလ္လာဟ့်အဆွေတော်”၊“အိမာမွန်နာစ်” – “လူသားတို့၏ဦးစီး ခေါင်းဆောင်”ဟူသောဘွဲ့တော်များကို ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
တမန်တော်ကြီးအိဗ်ရာဟီမ်သည် “သောင်ဝ်ဟီးဒ်” သစ္စာတရားအတွက်မိမိ၏ ဖခင်နှင့် သံယောဇဉ်ဖြတ်ခဲ့၏။မိမိ၏ အမျိုးသားများနှင့် လမ်းခွဲခဲ့၏။ နမ်ရူဒ်ဘုရင်နှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး မီးပုံထဲသို့ ပစ်ချခံခဲ့ရ၏။ တိုင်းပြည်မှ လည်း ထွက်ခွာခဲ့ရ၏။ဇနီးကြင်ရာနှင့် သားရင်နှစ်သည်းချာကိုလည်း လူသူမနီး ကန္တာရ လွင်ပြင်ကြီးတွင် အရှင့်အမိန့်တော်အရ စွန့်ထားခဲ့ရ၏။စည်းစိမ် ဥစ္စာတို့လည်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရ၏။ ထိုဆောင်ရွက်ချက်များ အားလုံးသည် “ကုရ်ဗာနီ”စွန့်လှူမှုများပင်ဖြစ်သည်။
ထိုစွန့်လှူမှုများထက်ပိုသော အကြီးမားဆုံး အံ့ဖွယ် စွန့်လှူမှုကြီးသည်ကား မိမိအသက်အရွယ်ကြီးကာမှရရှိသည့်မိမိ၏အရိုက်အရာကို ဆက်ခံမည့် မိမိ၏ တစ်ဦးတည်းသော ရင်နှစ်သည်းချာ သားဦးရ တနာကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှစ်သက်တော် မူရန်အတွက် လည်ပင်းပေါ်ဓားတင် လှီးဖြတ်“ကုရ်ဗာနီ”ပြုရန် ဆုံးဖြတ်၍ ပြည့်ဝစွာ နာခံမှုပြုခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ပြုရာတွင် တမန်တော်ကြီးအိဗ်ရာဟီမ်သည် တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်စွာဖြင့်၊အမိန့်အာဏာဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမျိုး မဟုတ်ပေ။သားတော် တမန်တော် အိစ်မာအီလ်၏ ဆန္ဒကို မေးမြန်းပြီး၊ သားတော်၏ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်သော ဆန္ဒနှင့် သဘောတူညီချက်ကိုရယူပြီးမှသားအဖနှစ်ဦး သဘောတူ ကြည်ဖြူစွာဖြင့် စွန့်လှူခြင်းအမှု “ကုရ်ဗာနီ”ကို ပြုခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား အရာခပ်သိမ်း တို့ထက်ပို၍ ချစ်မြတ်နိုးတော်မူကြောင်းကိုအောင်မြင်စွာ ပြသနိုင်ခဲ့သည့်အရည်အသွေး မှတ်ကျောက်တင် စမ်းသပ်မှုကြီး ပင်ဖြစ်သည်။ရင့်သန်သောဉာဏ်နှင့်ယှဉ်ကာ ထူးကဲမြင့်မြတ်လှသည့် စွန့်လှူခြင်း အမှုကိုပြုကျင့်သည့် တမန်တော်ကြီး အိဗ်ရာဟီမ်၏ထုံးဓလေ့“စွန္နသ်”တော်ကို ကမ္ဘာပျက်ပြုန်းနောက်ဆုံးနေ့ တိုင်အောင် စံနမူနာယူ၍ ကျင့်သုံးဆောက်တည် နိုင်ကြစေရန်အလို့ငှာအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် “ကုရ်ဗာနီ”တည်းဟူသော မြတ်သောကျင့်စဉ်ကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ [ကြည့်၊ ကုရ်အာန် (၃၇း၁၀၂-၁၀၈)]
“ကုရ်ဗာနီ”ကျင့်စဉ်သည် တစ်ပါးတည်းသောအရှင်ကို နာခံဘ၀ တည်ဆောက်မှုလမ်းစဉ်၌ အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။“သောင်ဝ်ဟီးဒ်” (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်း ပြီးပြည့်စုံစွာတည်ရှိခြင်း)
တရားအပေါ် အခြေပြုကျင့်သုံးမှုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့် အရာကိုမှ တသ၍ သတ္တ၀ါအားလှီးဖြတ်ခြင်းကို ခွင့်မပြုချေ။ထို့ပြင် သားကောင်ကို လှီးဖြတ်(ဇဗာဟ်ပြုရ)ခြင်း “ကုရ်ဗာနီ”ကျင့်စဉ်သည် –
* အမျက်ဒေါသထွက်နေသော နတ်ဆိုးကြီး အမျက်ဒေါသ ပြေပျောက်စေရန် ယဇ်ပူဇော်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်။
* မိမိတို့၏အပြစ်များ ပပျောက်စေရန်အတွက်ဆေးကြောမှု ပြုလုပ်ခြင်းလည်း မဟုတ်ပေ။
ကျေးဇူးတော်ရှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်စွန့်လှူရန် အမြဲအသင့်ရှိကြောင်း အတွင်းနှလုံးသားမှ ခံယူချက်ကိုပြင်ပ သင်္ကေတအဖြစ် ပြသခြင်းသာဖြစ်သည်။ အနှစ်မရှိသော အကာသည် လည်းကောင်း၊ ၀ိညာဉ် မရှိသောခန္ဓာသည် လည်းကောင်း၊ လက်တွေ့မပါသော စကားသည် လည်းကောင်း၊ စစ်မှန်သောတန်ဖိုးမဟုတ်ချေ။တိရစ္ဆာန်တို့ကို လူ့အသုံးအဆောင်အဖြစ်၊ လူ့အကျိုး ပြုရန်အတွက် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က သတ်မှတ်ပေးထားပေရာလူက တိရစ္ဆာန်ကို အသုံးချရမည်။ တိရစ္ဆာန်သည် လူကိုနာခံရ သကဲ့သို့ လူသည်လည်း မိမိ၏ အရှင်သခင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားနာခံရန်အသင့်ရှိရပေမည်။စားသုံးခွင့်ရှိသော တိရစ္ဆာန်ကိုပင် ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန် ဖြစ်သော ကျေးဇူးတော်ရှင် အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ နာမတော်ကိုတသလှီးဖြတ်ပြီးမှ စားသုံးခြင်းမှာ သစ္စာတရားကို စောင့်ထိန်းခြင်း ဖြစ်ပေသည်။သားကောင်ကို “ကုရ်ဗာနီ”ပြုခြင်းမှာ နာခံခြင်း၏ ပြင်ပသင်္ကေတသာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်စွန့်လှူရမည်မှာမိမိတို့၏ စိတ်နှလုံးသားအတွင်းမှ ရှိုင်သွာန် အဖျက်အင်အားစုများ၊ လောဘ၊ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန စသည့် အရာများပင်ဖြစ်သည်။“ကုရ်ဗာနီ”၏ အနှစ်သာရနှင့် ပတ်သက်၍ ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်၊စူရဟ်ဟဂ်ျတွင်…….
“ကုရ်ဗာနီသားကောင်တို့၏အသားများသည်လည်းကောင်း၊ အသွေးများသည်လည်းကောင်း၊အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အထံ တော်သို့ အလျင်းရောက်ရှိသည် မဟုတ်ပေ။စင်စစ် အသင်တို့၏ရိုသေလေးမြတ်မှု၊ အမိန့်တော်ကို လိုက်နာမှု၊ ကောင်းမြတ်သောအကျင့် သီလ (သတ်က်ဝါ)သည်သာလျှင်ထိုအရှင်မြတ် အထံတော်သို့ ရောက်ရှိပေသည်။ ဤနည်းအတိုင်းပင် ထိုအရှင်မြတ်သည် ယင်းကုရ်ဗာနီ သားကောင် များကို အသင်တို့အကျိုးငှာ အသင်တို့၏ လက်အောက်ခံများဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။အသင်တို့အား တရားလမ်းမှန်ကို ညွှန်ပြတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်သာ အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအသင်တို့ ကြွေးကြော်ကြစေရန်အလို့ငှာဖြစ်ပေသည်။ ကောင်းကျိုး ပြုသူတို့အား ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်းကိုပေးလော့”ကုရ်အာန် (၂၂း၃၇)
ထို့ကြောင့် “ကုရ်ဗာနီ”၏သဘောတရားမှာ တုနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကရုဏာတော်ရှင်၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တစ်ပါးတည်းရှိခြင်းကို သိရှိနားလည်စေပြီး၊ “ကုရ်ဗာနီ”၏ အနှစ် သာရမှာ ထိုအရှင်မြတ် နှင့် အမှန်တရားအတွက်“သတ်က်ဝါ” အလ္လာဟ်သိစိတ် မပြတ်ထား၍ စွန့်လှူခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။
“ကုရ်ဗာနီ”သည် လူတို့၏မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်နှင့် လုပ်ရပ်တို့ကို သန့်စင်စေခဲ့သည်။နတ်ပူဇော်ပသမှု၊ လူကို သတ်၍ယဇ်ပူဇော်မှု စနစ်တို့ကို ပပျောက်စေခဲ့သည်။ မိမိတို့၏ကျေးဇူးတော်ရှင် အစစ် အမှန်ဖြစ်သော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို သိရှိစေသည်။မိမိတို့၏ တစ်သက်တာတွင် ကျင့်ကြံရမည့် “အိဗာဒသ်”ဘ၀တည်ဆောက်မှုအတွက် မိမိကိုယ်မိမိစွန့်လွှတ်မှု၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် စွန့်လှူရန် အသင့်ရှိမှု၊ အများကောင်းကျိုးဆောင်မှု၊မရှိဆင်းရဲသားတို့အား လှူဒါန်းမှု စသည် တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေ သည်။ လူတစ်ဦးအနေဖြင့် မိမိ၏ဆန္ဒအရ မလုပ်ချင်သော လုပ်ရပ်တစ်ခုကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် အမှန်တရားအတွက်လုပ်ရဲသောသတ္တိနှင့် စွန့်လှူခြင်းမှာ “ကုရ်ဗာနီ”၏ ထူးခြားသော အရေးပါမှုပင်ဖြစ်ပေ သည်။ထို့ကြောင့် အစ္စလာမ်သာသနာတွင် “ကုရ်ဗာနီ”ဟူသည် မွတ်စ်လင်မ်တစ်ဦး အနေဖြင့်မိမိ၏ ဆန္ဒ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အသက်ကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို နာခံအပ်နှင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်အလ္လာဟ်ကမိမိအားထောက်ပံ့ပေးသနား တော်မူထားသော ကာယ၊ ဉာဏ၊ ဓန စွမ်းရည် ပိုင်ဆိုင်မှု အားလုံးဖြင့်အမှန်တရားအတွက်ကြိုးပမ်းနေခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ လိုအပ်ပါကမိမိအသက်ကိုပင်စွန့်လှူရန်သွန်သင်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
သားကောင်ကို “ဇဗာဟ်”ပြုလှီးဖြတ်ရုံမျှဖြင့် “ကုရ်ဗာနီ” တာဝန်ကျေပွန်သွားမည်မဟုတ်။နှလုံးသားမပါသော “ကုရ်ဗာနီ” သည် ဟန်ဆောင်မှု၊ ပြစားမှု၊ အသားစားလိုမှုသာဖြစ် ပေမည်။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် လက်ခံတော်မူမည်မဟုတ်ချေ။စွန့်လှူခြင်း ကျင့်စဉ် “ကုရ်ဗာနီ”ကို ပြုလုပ်ကြမည့် သူများသည် တမန်တော်ကြီး အိဗ်ရာဟီမ်၏မိမိရင်သွေး အပေါ် ချစ်မြတ်နိုးသည့်စိတ်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့် တော်အား နာခံလိုမှုဖြင့်အစားထိုးနိုင်ခဲ့သော စိတ်အခြေအနေမျိုး ပေါ်ပေါက်လာအောင် သမိုင်းဘီးကို တစ်ကျော့ပြန်လှည့် တွေးကာအသိတရားထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။ သားကောင်ကို လှီးဖြတ် စဉ်တွင် မိမိ၏ အဇ္ဈတ္တသဏ္ဍာန်အတွင်းမှတိရစ္ဆာန်စရိုက်ကိုပါ လှီးဖြတ်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဤမြတ်သောကျင့်စဉ် “ကုရ်ဗာနီ”သည် မွတ်စ်လင်မ် တို့အတွက် အလွန်အရေးပါသည့်ကျင့်စဉ်ဖြစ်ပေရာ တာဝန်ရှိပါလျက်တာဝန်ပျက်ကွက်ခဲ့သော် ထိုသူတို့အဖို့ “မွတ်စ်လင်မ်” ဖြစ်ရခြင်းပင်လျှင် အဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်(ဆွ)က-
“အကြင်သူသည်ကုရ်ဗာနီûပနိုင်သောအခြေအနေရှိပါလျက် ကုရ်ဗာနီမပြုလျှင်ထိုသူသည်ငါတို့၏ ၀တ်ပြုရာနေရာ(မုဆွလ’ာဟ်) သို့လာရောက်ခြင်းမပြုရ”ဟုမိန့်ကြားတော်မူခဲ့သည်။ (ဟာကင်မ်ကျမ်း)
* “ဇဗာဟ်”လှီးဖြတ်မည့်သူသည် “မွတ်စ်လင်မ်”ဖြစ်ရမည်။ မူးယစ်နေသူ၊ ရူးသွပ်သူ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူ မဖြစ်စေရ။
* လှီးဖြတ်မည့် ကိရိယာသည် အလွန်ထက်ရမည်။ တိရစ္ဆာန်၏ သားရေ၊ လေပြွန်နှင့် သွေးကြောများကို လျင်မြန်စွာ ပြတ်စေပြီး သွေးများချက်ချင်း လျင်မြန်စွာ ထွက်စေရမည်။
* သားကောင်၏မျက်နှာကို “ကိဗ်လဟ်”ဘက်သို့ လှည့် ထားပြီး(ဗိစ်မိလ္လာဟိအလ္လာဟုအက်ဗရ်)ဟုရွတ်ဆို၍ လှီးဖြတ်ရမည်။
* လှီးဖြတ်မည့် သတ္တ၀ါရှေ့၌ ဓားသွေးပြနေခြင်း၊ အာရုံ ကြောရှိရာ ကျောရိုးတိုင်အောင် ခေါင်းပြတ်သည်အထိ လှီးဖြတ်ခြင်း၊အသက်မထွက်သေးမီလည်ပင်းကိုချိုးခြင်း၊ တုံးသောဓားဖြင့် လှီးဖြတ်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
တမန်တော်မြတ်အား သာဝကများက “ကုရ်ဗာနီ” ပြုလုပ်ခြင်းသည် မည်သည်ပါနည်းဟု မေးလျှောက်ခဲ့ကြလေရာတမန်တော်မြတ်က အသင်တို့၏ ဖခင်ကြီး တမန်တော် အိဗ်ရာဟီမ်(ေ)၏ လမ်းစဉ်ဖြစ် သည် ဟုဖြေကြားတော်မူခဲ့သည်။(အဟ်မဒ်ကျမ်း)
တမန်တော်မြတ်သည် “မဒီနဟ်”မြို့တော်တွင် (၁၀)နှစ်နေထိုင်တော်မူခဲ့ရာ နှစ်စဉ်ပင် “ကုရ်ဗာနီ”ပြုတော်မူခဲ့သည်။(သိရ်မိဇီကျမ်း)
“ဟဂ်ျ”မသွားသောသူများအနက် “ကုရ်ဗာနီ”ပြုလုပ်ရန် တာဝန်ရှိသူများ (၀ါ) တတ်စွမ်းနိုင်သူများသည်“အီးဒ်”နေ့တွင် “အီးဒ်ဆွလာသ်” ၀တ်ပြုပြီးနောက် “ကုရ်ဗာနီ”ကိုပြုကြရန် တမန်တော်မြတ်က မှာကြားတော်မူခဲ့သည်။(ဗုခါရီကျမ်း)
“အီဒ်ဂါဟ်”ကွင်းပြင်၌ “ကုရ်ဗာနီ”ပြုလုပ်ခြင်းသည် တမန်တော်မြတ်၏ (စွန္နသ်)ဓလေ့တော်ဖြစ်၏။(ဗုခါရီကျမ်း)
“အီးဒ်ဆွလာသ်”၀တ်မပြုမီအလျင် “ကုရ်ဗာနီ”ပြုလုပ်သော် ၄င်း၏ “ကုရ်ဗာနီ”ပြုလုပ်ခြင်း၌ ကုသိုလ်အကျိုးမရှိပြီ။မိမိ၏ ဆန္ဒအရ သားကောင်လှီးဖြတ်ခြင်းသာဖြစ်ပေမည်။ အခြား သားကောင် တစ်ကောင် အား ထပ်မံ၍ “ကုရ်ဗာနီ”ပြုရပေမည်။(ဗုခါရီကျမ်း၊မွတ်စ်လင်မ်ကျမ်း)
ကုရ်ဗာနီကို(၃)ရက်တိုင် ပြုလုပ်နိုင်၏။ ဇုလ်ဟိဂ်ျဂျဟ်လ (၁၀)ရက်“အီဒုလ်အဒွဟာ”ဆွလာသ်ဝတ်ပြုပြီးချိန်မှဇုလ်ဟိဂ်ျ ဂျဟ်လ(၁၂)ရက်နေ့ ညနေ နေမ၀င်မီအချိန်အထိ ဖြစ်သည်။ (မုအပ်သွာကျမ်း)
ကုရ်ဗာနီအသား၊ သားရေများကို လုပ်ခအဖြစ်မပေးရ။(ဗုခါရီကျမ်း၊ မွတ်စလင်မ်ကျမ်း)
ကုရ်ဗာနီပြုလုပ်မည့်သူသည် ဇုလ်ဟိဂ်ျဂျဟ်လ၏ ဆန်းဦးစ “လ”ကို မြင်သည်နှင့်မုတ်ဆိတ်၊ ဆံပင်တို့ကို သခြင်း၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်း လှီးဖြတ်ခြင်းတို့ကို ရပ်တန့်ထားရမည်။အီးဒ်ဆွလာသ် ၀တ်ပြုပြီးမှ သာ မုတ်ဆိတ်၊ ဆံပင်တို့ကို သခြင်း၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်း လှီးဖြတ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရမည်။(မွတ်စ်လင်မ်ကျမ်း)
“အောင်မြင်မှု”ဟူသည်… “အလ္လာဟ်”အရှင်မြတ်၏ အလိုတော်အတိုင်း ဘ၀ကို တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။“အလ္လာဟ်”အရှင်မြတ်၏အလိုတော်အတိုင်းဘ၀ကိုတည်ဆောက် ခြင်းဟူသည်ကား
“အလ္လာဟ်” အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော် (၀ဟီ) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်နှင့်တမန်တော်မြတ်လက်တွေ့ကျင့်သုံး ပြသသွားခဲ့သော ဘ၀တည်ဆောက်မှုပုံစံအတိုင်းဘ၀ရပ်တည် မှုပြုခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤသို့ ဘ၀ရပ် တည်မှုပြုနိုင်ခြင်းသည်သာလျှင် ဘ၀၏ အနှစ်သာရကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်ပြီး အောင်မြင်သော လူသားအဖြစ် ရှင်သန်ခြင်းဖြစ်ပေမည်။[ကြည့်၊ ကုရ်အာန် (၃၃း၇၁)]
“အလ္လာဟ်”အရှင်မြတ်၏ အလိုတော်အတိုင်း ဘ၀ကို တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းသည် ဘ၀ပန်းတိုင်ဖြစ်ပေရာယင်းပန်းတိုင် သို့ အရောက်လှမ်းနိုင် သူတို့သည်သာ အောင်မြင်သူများဖြစ်ကြကုန်၏။၄င်းတို့သည် “အလ္လာဟ်”အရှင်မြတ်၏အလိုတော်ကို မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများထက်ပို၍ မြတ်နိုးကြသည်သာမကအရှင့် အလိုတော်အတွက် အသက်ကိုပင် စွန့်ဝံ့ကြ၏။“အလ္လာဟ်”အရှင်မြတ်ကလည်း ၄င်းတို့၏ ဘ၀ တည် ဆောက်မှုပုံစံကို နှစ်သက်မြတ်နိုးတော်မူပေသည်။၄င်းတို့သည် “အလ’ာဟ်”အရှင်မြတ်၏ အုပ်စုဝင်များဖြစ်ကြသည်။အရှင်မြတ်၏ အုပ်စုဝင်တို့သည် အတိတ်သမိုင်းတွင် အောင်မြင်ခဲ့ကြ၏။
ယနေ့လည်း အောင်မြင်ဆဲဖြစ်ကြ၏။ကမ္ဘာတစ်သက် အောင်မြင်ကြဦးမည်ဖြစ်သည်။ [ကြည့်၊ ကုရ်အာန် (၅း၁၁၉)]
လူမှန်လျှင် အသက်ရှင်၍ နေလိုကြသည်။မိမိအသက်ကို မြတ်နိုးသည်။မိမိ၏ ဥစ္စာပစ္စည်းကို မက်မောသည်။မိမိ၏ ဇနီး/ခင်ပွန်း၊ သား/သမီးတို့ကို တွယ်တာသည်။ယင်းတို့ကို မည်သူ အလွယ်တကူ စွန့်နိုင်ပါမည်နည်း?
သို့သော် အမှန်တရားအတွက် ယင်းတို့ကိုစွန့်နိုင်ရမည်။ယင်းသို့ စွန့်လွှတ်နိုင်မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အောင်မြင်သူများဖြစ်ကြပေမည်။ဤသို့ စွန့်နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိကို“အလ္လာဟ်”အရှင်မြတ်က ကျွန်ုပ်တို့အား စမ်းသပ်စစ်ဆေးတော်မူပေမည်။ [ကြည့်၊ ကုရ်အာန် (၃၃း၇၁)]
ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ အရှင်မြတ်၏ စမ်းသပ်မှုများကို အောင်မြင်စွာ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရန်မှာ ရခဲလှသော အရည်အသွေး ဖြစ်သည်။ခေတ်ကာလအခြေအနေကို မျက်ခြည်မပြတ်ဘဲ ယုံကြည်မှုသတိဖြင့် အမှန်တရားကို
မြတ်နိုး လျက်ဇွဲသတ္တိဖြင့် ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်သွားကြမှသာလျှင် အောင်မြင်သူတို့ လျှောက် သောလမ်းပေါ်သို့ဆိုက်ရောက်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ လွယ်ကူ လှသည်တော့မဟုတ်ချေ။ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းလမ်းစဉ်ကို ပန်းတိုင်အဖြစ် ရည်မှန်းလျက်ဤ““ကုရ်ဗာနီ””အီးဒ်ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲကြပါစို့ ……………။
(၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီ၊ရန်ကုန်တိုင်း၏အစ္စလာမ့်ဒေသနာ-၂ ဟိဂျရသ်၊ဟဂ်ျ၊ကုရ်ဗာနီစာစဉ်တွင် ဖော်ပြထားသော
– သီရိပျံချီ အလ်ဟာဂ်ျ အလ္လာမဟ် ဃာဇီ မုဟမ္မဒ် ဟာရှင်မ် ၊
– အလ်ဟာဂ်ျ မောင်လာနာ ဦးအုန်းသောင် (အရဗီသိပ္ပံ) ၊
– အလ်ဟာဂ်ျ မောင်လာနာ အုမရ် ဦးမြင့်နိုင် (ရင်းတော်)၊
– မောင်လာနာ အဗ်ဒုရ် ရဟီမ် ဦးမြင့်လွင်(ကျုံဒိုး) B.E (Met)
– အလ်ဟာဂ်ျ ဆရာ ဦးအေးလွင်
– အလ်ဟာဂ်ျ ဒေါက်တာမြင့်သိန်း (ငြိမ်းချမ်းလုလင်)တို့၏ ရေးသားချက်များမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။)
Islamic Religious Affairs Council Myanmar ကူးယူဖော်ပြပါသည်
This entry was posted on October 19, 2012, in အစ္စလာမ့်ရေးရာ.	Leaveacomment